View points on various topics, random thoughts, arts and creations, professional life of me andadiary of my life.
Alwan Pyay's Facebook
ချစ်သူ ရှိသော မိန်းကလေး
ရေးခဲ့ပြီးသမျှတွေ Feb 2015 (1) Jan 2015 (1) Dec 2014 (1) Nov 2014 (1) Oct 2014 (4) Sep 2014 (8) Aug 2014 (7) Jul 2014 (3) Jun 2014 (2) May 2014 (4) Mar 2014 (2) Feb 2014 (1) Jan 2014 (1) Dec 2013 (5) Nov 2013 (1) Sep 2013 (3) Aug 2013 (1) Jul 2013 (3) Jun 2013 (5) May 2013 (2) Apr 2013 (4) Mar 2013 (2) Feb 2013 (7) Jan 2013 (1) Oct 2012 (6) Sep 2012 (4) Aug 2012 (2) Jul 2012 (8) May 2012 (1) Jan 2012 (10) Dec 2011 (10) Nov 2011 (16) Oct 2011 (9) Sep 2011 (7) May 2011 (6) Apr 2011 (1) Mar 2010 (3) Feb 2010 (1) Jan 2010 (2) Dec 2009 (1) Nov 2009 (6) Oct 2009 (4) Aug 2009 (1) Jul 2009 (5) Jun 2009 (5) May 2009 (3) Jan 2009 (5) Dec 2008 (9) Nov 2008 (4) Oct 2008 (7) Sep 2008 (3) Aug 2008 (2) Jul 2008 (5) Jun 2008 (7)
3:38 PM | Posted by Phyu | Edit Post
ခန်းစီး မရှိသော အခန်းထဲ ပြူတင်းမှ လရောင်သည် တိုးယိုပေါက် ဖြာကျခွင့် ရပါသည်။ ညသည် နက်လာသည်ဟု ဆိုနိုင်ရဖို့ လူသံ ကားသံတွေ တဖြည်းဖြည်း တိတ်သွားဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် ညသည် ထင်သလောက် မနက်ရှိုင်း နိုင်တော့အောင် ညမအိပ်သော သူတွေ များများ လာပါသည်။
ညနက်နက်ကို ကြိုက်သော သူများ များလာသော အခါ ညနက်နက် ဆိုသည့် အဓိပ္ပါယ်ပျောက်သွားသလား။ ဒါမှဟုတ် ညနက်နက် ဆိုသည့် အဓိပ္ပါယ် ပြောင်းသွားတာလား။ ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်က ကိုယ်တိုင် ယူစွဲထားသည့် ပုံစံဖြင့် ညနက်နက်ကို ချစ်ခင်ခွင့်ကို အစွဲထားနေခြင်းလား။
ဟိုး အရင်ကတော့ ကျွန်မ ချစ်သော ညနက်နက်များကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးသည်။
တကယ်တော့ ကျွန်မ ညနက်နက်ကို ချစ်သော အချစ်သည် အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုရခက်ပါသည်။ နှစ်သက်ခြင်း နှင့် ကြောက်ရွံ့ခြင်း နှစ်ခု ဆတူ ရောထားသည်။ ထို့အတူ ညနက်နက် ဟူသည် ပြူတင်းမှ ချည်းနင်းလာသော လရောင်၊ ကက်ဆက်ခွေလေး ထည့်ပြီး နားကြပ်ဖြင့် နားထောင်သော ထူးအိမ်သင်၊ ရင်ဂို၊ စည်သူလွင်၊ နေမျိုးဆေး၊ တာရာ ၊ အေးချမ်းမေ၊ မဒီ ၊ အငဲ၊ လေးဖြူ၊ ထွဏ်းထွဏ်း တို့၏ သီချင်းများ ပါဝင်သည်။ မောင်စိန်ဝင်း( ပုတီးကုန်း ) ၏ ကဗျာများ ပါဝင်သည်။ ဟန်သစ်၊ အပျိူစင်၊ ပန်းဝေသီ၊ မဟေသီ၊ ရင်ခုန်ပွင့်၊ ကလျာ စသည့် ကဗျာနှင့် ဝတ္ထုတိုများ လှိုင်လှိုင်ပါသော မဂ္ဂဇင်းများ ပါဝင်သည်။ တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်၊ ဂျူး၊ မဟူရာ (လှိုင်ကော်)၊ မိုးမိုး ( အင်းလျား)၊ အကြည်တော်၊ နေနော်၊ တာရာမင်းဝေ စသူတို့ ပါသည်။ ကိုယ်တိုင်ရေး ဟိုတစ်စ သည်တစ်စ ကဗျာတို့နှင့် အိမ်မျက်စောင်း ထိုးက ည ၁၂ နာရီ ဆို စတတ်သော ဂစ်တာဝိုင်းမှ သီချင်းများနှင့် မှတ်မှတ်ရရ မဉ္ဇူရီ ဆိုသည့် တစ်ပုဒ်ထဲကို သီချင်းကိုပဲ ဆိုပြီး ပွဲသိမ်းတတ်သော လူတစ်ယောက်၏ သာယာသော သီချင်းသံ ပါဝင်သည်။ အသာ စေ့ရုံ စေ့ထားသော ကျွန်မ အခန်းတံခါးကို ကျွန်မအဖေ မသိအောင် လက်ကလေး တစ်ဖက်အရင်သွင်းကာ ဖွင့်တတ်သော ဥာဏ်ကောင်းပြီး ချစ်မွှေးပါသော ကျွန်မ၏ ညိုတိုတို စိမ်းဖန့်ဖန့် အမွှေးပြောင်ပြောင်းလေးများကို ပိုင်ဆိုင်သော ရင်ခွင်ထဲ တိုးဝင် အိပ်တတ်သည့် မျက်လုံး ဝိုင်းဝိုင်း ကြောင်ကလေး တစ်ကောင် ပါဝင်သည်။ စောင်ခြုံထဲတွင် ဖွင့်ပြီး ဝတ္ထုများကို ခိုးဖတ်ခွင့် ပေးသည့် ဓါတ်မီး အသေးတစ်လက်ပါဝင်သည်။ အမှောင်ကို ကြောက်ပေမယ့် ကိုယ်ပိုင် ကမ္ဘာဆီ ရောက်ဖို့ ညနက်နက်ကို ချစ်ခင်စွာ စောင့်ခဲ့ရသော နေ့ရက်များပင်။ ကျွန်မ၏ လရောင်ဖြာသော ညနက်နက် များကို အဓိပ္ပါယ်ဖြည့်စွက်ပေးနေသော ရသများစွာ။
ကိုယ်ပိုင် ဆယ်ကျော်သက်တို့ကို မြင်တိုင်း သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ကမ္ဘာလေး ဘာများ ဖြစ်မလဲလို့လည်း….တွေးမိသေးသည်။ ကမ္ဘာလေး။ TV မှာ ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ကမ္ဘာလေးပါ အစချီတဲ့ ကြော်ငြာသံကို ကြားတိုင်း ခက်ခက်ခဲခဲ တည်ဆောက်ခဲ့ရသည့် ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်ပိုင် လရောင်ဖြာတဲ့ ညနက်နက် ကိုယ်ပိုင် ကမ္ဘာလေးကို လွမ်းမိပါသည်။
အခုတော့ လူတွေ သိပ်မအိပ်ကြတော့…. ညသည် ထင်သလောက် မနက်သလို ကျွန်မ ကိုယ်ပိုင် ကမ္ဘာသည်လည်း ထင်သလောက် မခက်တော့ … ဒါပေမယ့် … ဆားမပါသော ဟင်းတစ်ခွက်လို ….တစ်ခုခုလို နေသလိုလို... ဘာများလည်း ဆိုတာတော့ ကျွန်မ မသိ.. ရှာဖွေ မတွေ့... ညတို့ သည်ပင် မနက်ကြတော့တာလား။ ကျွန်မက ပဲ အစွဲ ကြီးသလား ။ ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်ပဲ ပြောင်းလဲ ခဲ့ပြီလား။
(၂၀.၂.၂၀၁၅ ၊ ရန်ကုန်)
Labels: အက်ဆေး |0comments | Links to this post
8:59 AM | Posted by Phyu | Edit Post
ဆောင်းလေ အေးသည် ဝေ့ကနဲ ရုံးပေါက်ဝမှ ထွက်လာသော ကျွန်မကို ဆီးကြို ခရီးဦးပြုသည်။ ဘတ်စ်ကား မှတ်တိုင်ဆီကို ခြေလှမ်းကို ဦးတည်လိုက်ရင်း မျက်စိရှေ့ တည့်တည့်မှ ပန်းရောင်စုံတို့နှင့် လှနေသော ပန်းဆိုင်ကို မြင်မှ အိမ်မှ အိပ်ယာနံဘေး ပန်းအိုးလေးမှ ပန်းကလေးတွေ နွမ်းနေပုံ ကို သတိရတော့သည်။ သို့သော် ဘတ်စ်ပေါ်ကို ပန်းဝယ်ပြီး တက်ဖို့ကတော့ မိုက်မဲရာ ကျပေလိမ့်မည်။ နှင်းဆီ ဝယ်မိလျှင် တပါးသူ တို့ကို စူးနိုင်သလို အစူးမပါသော ပန်းဆိုလျှင်တော့ တိုးလို့ ကြွေမပေါ့။ ကျွန်မနေသည့် လမ်းထိပ်မှ ပန်းဆိုင်က ကျွန်မ ပြန်ချိန်ဆို မရှိလောက်တော့ အိပ်ယာနံဘေးမှ ပန်းကလေးများသည် အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်သမျှ မမြဲကြောင်းကို ဆက်လက်ပြသနေပေဦးတော့..။ “ကြွေကျနေတဲ့ သစ်ရွက်လေး တစ်ရွက်က အစ ခင်ဗျားကို တရားပြနိုင်တယ်။ ခင်ဗျား ဘာဝနာပွားနိုင်မယ် ဆိုရင်ပေါ့” လို့ အိုရှိုးက သူ့တပည့်မ ကို ပြောခဲ့ဖူးသည်။
ညက ကိုးနာရီ ကျော်ပြီမို့ ဈေးဝယ်စင်တာက လှလှပပ ကောင်မလေးများနှင့် မှတ်တိုင်က စည်ကားနေသည်။ သူတို့ မျက်နှာမှ ရောင်စုံ အလှများက မပီပြင် မီးရောင်အောက်တွင်ပင် စိုစိုပြေပြေ ဝင့်ဝင့်ကြွားကြွား။ ငယ်ဂုဏ် ငယ်သွေး ကြွကြွ လှလှပပ။ အလုပ်မဆင်းမီက ထပ်ပြီး ပြင်ဆင်ခဲ့ကြပုံ ရသည်။ သို့သော် သူတို့၏ စိတ်တွင်းတွင်တော့ သူက မျက်နှာပေါ်က အရောင်များကဲ့သို့ တောက်တောက်ပပ မဖြစ်ကြ။ တစ်ယောက်က ဖုန်းဖြင့် လာမကြိုသော ရည်းစားကို ရန်တွေ့သည်။ နောက် တစ်စုက တစ်စုံတစ်ယောက်၏ အထက်လူကြီး မကောင်းကြောင်းကို ဝိုင်းဖွဲ့ ပြောဆိုနေကြသည်။ ဒီနေ့ ဈေးရောင်း ကောင်းသူက သူ ဘယ်လောက် ကော်မရှင်ကြေး ရနိုင်ကြောင်း ကျန်သူများကို ခပ်ကြွားကြွားဆိုသည်။ ကျန်သူများက သူမ တော်ကြောင်း အားကျသံဖြင့် ပြောသူရှိသလို ခနဲ့တဲတဲ့ လုပ်သူလည်းရှိသည်။ သူတို့ အားလုံး အလုပ်ဆင်းချိန်တွင် ဟန်လုပ်နေသော်လည်း တစ်နေတာအဆုံးမှာ မောပန်းလှပြီဟု မျက်ဝန်းများက ဆိုနေကြသည်။ သူတို့ က နေသော တစ်နေ့တာ တစ်ခန်းရပ် ပြဇာတ် အိမ်ပြန်ရောက်ချိန်တွင် ပြီးပါစေသား။ သူတို့ မောလှပြီ။
သူတို့ မောလှပြီလို့ တွေးသော ကျွန်မ ကိုယ်တိုင် မောလာသောအခါ ပြန်လွင့်သွားသော ကိုယ့်စိတ်ကို ဖြေလျော့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ဖို့ နားကြပ်ကို တပ်လိုက်သည်။ ဂီတသည် ပန်းမာလာတို့၏ ရနံ့ကဲ့သို့ပင် လူ၏ စိတ်နှလုံးကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ နိုင်သည။် ဂီတသံတွင် စိတ်ကို နှစ်မြှုပ်လိုက်ရင်း စည်းချက်နှင့် အညီ ကခုန်ခြင်းသည်ပင်လျှင် တရားထိုင်ခြင်းကဲ့သို့စိတ်ကို မပျံ့မလွင့် ဖြစ်အောင် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ကျွန်မ စိတ်ကို မပျံ့မလွင့် ဖြစ်အောင် စန္ဒရားသံတို့က ပြန်လည် ခေါ်ဆောင် စီးဝင်စေမိသည်။ မောနေသော သူတို့ကို ဒီဂီတကိုပင် မျှဝေချင်မိ သလိုလို။ ဒါပေမယ့် သူတို့ လက်သင့်သံပါ့မလား။ ကိုယ့်ရဲ့ ရူးနှမ်းမှုသာ ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဟော.. စီးရမည့် ဘတ်စ်ကား လာလေပြီ။ စူးရှလှသည့် ကားစပယ်ရာ အသံနှင့် အတူ စောင့် နေတဲ့ လူတွေ တိုးတိုးဝှေ့ဝှေ့ တက်ကြသည်။ ကလေးချီထားရင်း တက်နေသော ကလေးအမေကိုပင် မစောင့် သူထက်ငါ တိုးလို့ တက်ကြသည်။ အိမ်ကို ပြန်ချင်ဇော နဲ့ ၊ ကားပေါ် ထိုင်စရာ၊ ခြေချစရာ နေရာလေး တစ်နေရာအတွက်နဲ့ ကျွန်မတို့ အားလုံး တိုးလို့ တက်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်မ အပါအဝင် လူများသည် ဇောကပ်သွားသော တစ်ခဏတွင် သတိမထားမိဘဲ ကားပေါ်ကို ရောက်သွားခဲ့ကြသည်။ ကလေးအမေ၏ ဒုက္ခကို စာနာချိန်မရလိုက်။ ကားပေါ်တက်နေချိန်တွင် ကျွန်မလည်း နားတွင် တပ်ထားသော ဘာဝနာ ဂီတသံကိုပင်လျှင် မေ့လျှော့သွားသည်။
နိစ္စဒူဝ။ လူတို့ အနာဂတ်ဆီကို ပြေးလွှားနေကြရသည်။ တစ်နေ့တာ လုပ်ဖွယ်တို့ကို လူတွေ လုပ်နေကြရင်း ဇောကပ်နေကြသည်။ မောပန်းကြရသည်။ တစ်နေ့တာ စား၊ ဝတ်၊ နေ၊ ရေး အပြင် အနာဂတ်မှာ ကြီးပွားဖို့၊ ချမ်းသာဖို့၊ အောင်မြင်ဖို့၊ ပျော်ရွှင်ဖို့။ ဒါတွေအတွက် ပြင်ဆင်ပြေးလွှားနေကြရ၊ အခု ခဏဆိုတာ အနာဂတ်အတွက် ပြင်ဆင်ဖို့ချည်း မြှုပ်နှံလိုက်ကြ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်စဉ်းစားမိတော့ ငယ်ငယ်က နားထောင်ဖူးတဲ့ “ ငါ့ဖိနပ်ကို တက်မနင်းနဲ့” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို သတိရမိသည်။ မူကြိုအရွယ် ဇာတ်ခုံပေါ်မှာ စုပေါင်းကပြတုန်း ကတည်းက ပြောခဲ့ရသော ငါ့ဖိနပ်ကို တက်မနင်းနဲ့ ဆိုသော စကားလေးသည်။ အသက်တွေ ကြီးလာသော်လည်း ဆက်ပြောနေရဆဲ။ ကိုယ့် အတ္တကို အထိမခံချင် သို့သော် ခံစားချက်နဲ့ နေရာ၊ အဖြစ်အပျက် တို့ကတော့ မတူတော့.. ။
ခဏနေက အိမ်ကို ပြန်ရောက်ဖို့ ကားပေါ်မှာ နေရာရဖို့ သားသည်အမေကို ဝင်တိုက်မိခဲ့သလိုမျိုး အလားတူ အနာဂတ်အတွက် ပြင်ဆင်ရင် ဘယ်သူတွေကို ထိခိုက်မိခဲ့ပါသလဲ။ တကယ်တော့ အတိတ်သည် ပြန်ပြင်ဆင်လို့မရ၊ အနာဂတ်သည် ရောက်ချင်လည်း ရောက်လာမည် သို့သော် မည်သူကမှ အာမခံချက် ပေးမထား။ အခု ပိုင်ဆိုင်နေသော ပစ္စုပ္ပန်ကို ဘာလို့ ကျွန်မတို့ သားသည်အမေကို ချစ်ခြင်း မမျှဝေ နိုင်ခဲ့ရတာပါလိမ့်။ ထိုသို့ မျှဝေပေးခြင်းက ပျော်ရွှင်ခြင်း ဘာလို့ မဖြစ်နိုင်ခဲ့တာပါလိမ့်။ အိမ်ပြန်ရောက်ဖို့ချည်း တနည်းဆိုရရင် အနာဂတ် တစ်ချိန်ဆီကို စိတ်လောနေကြလို့ပေါ့။ ကားထဲမှ လူများ တစ်ယောက်ဆင်း တစ်ယောက်တက်။ ဒီကားကြီးသာ လူ့ဘဝဆိုလျှင် ကျွန်မတို့ အလောတကြီးတက် အလောတကြီး ပြန်ထွက်ခွာ နေကြသူများပါလား။
တကယ်တော့ ကျွန်မတို့သည် ခဏတာလေး များစွာတွင်ပင် အဖြစ်အပျက်ပေါင်း များစွာနှင့် ဘဝပေါင်းများစွာ ပြောင်းလဲ နေခဲ့ကြသည်။ ရုံးတွင် အလုပ်သမား တစ်ယောက်၏ ဘဝ ရုံးက ပြန်ထွက်လာတော့ ပြီးဆုံးပြီး လမ်းပေါ်မှာ ခရီးသွား တစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝ စသည်။ လမ်းပေါ် ခရီးသွား တစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝ အဆုံးမှာ ဘတ်စ်ကားစီးသူ တစ်ယောက် ဘဝကို ပြောင်းပြီး လမ်းလျှောက်သူ ဘဝ ထပ်ပြောင်းပေဦးမည်။ ဖြစ်ပြီးနောက် ပျက်ခြင်းသည် မြန်သောကြောင့် တစ်ဆက်တည်း။ သို့သော် ထို ခဏပေါင်း များစွာ၏ ဖြစ်တည်မှုကို မေ့လျှော့ရင်း နောက်ဖြစ်တည်လာဖို့ ကျိုးစား ပုံဖော် နေခြင်းသည် နောက်ဘဝ အတွက် ကျိုးစားခြင်းပင် သို့နှင့် နိစ္စဒူဝ ဘဝများ လည်နေလေတော့သည်။ သံသရာ ဘဝလည်း ထိုသို့ပင်။ ကျွန်မ ဆင်းရမယ့် မှတ်တိုင်မရောက်ခင် ဘဝ၏ ခဏလေးများကို ဆင်ခြင်နေရင်း ဘေးကို ငဲ့ကြည့်တော့ ကျွန်မ ရပ်နေတဲ့ဘေးခုံမှ ထိုင်နေတဲ့ မိခင်ရင်ခွင်ထဲက ကလေးငယ်က ကျွန်မ ကျောပိုးအိတ် ကြိုးစကို ဆွဲရင်း ရယ်ပြနေသည်။ ကျွန်မလည်း နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ပြန်ပြုံးပြရင်း သူကလေး လူကို ဆုတ်ကိုင်လိုက်သည်။ ကျွန်မ ဆင်းမယ့် မှတ်တိုင် မရောက်ခင်အထိ သူကလေးနှင့် ကျွန်မသည် ခရီးဖော်။ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်ကြားမှာ စကားလုံးများ မလိုခဲ့ပါ။ “ကြွေကျနေတဲ့ သစ်ရွက်လေး တစ်ရွက်က အစ ခင်ဗျားကို တရားပြနိုင်တယ်။ ခင်ဗျား ဘာဝနာပွားနိုင်မယ် ဆိုရင်ပေါ့” လို့ အိုရှိုးက သူ့တပည့်မ ကို ပြောခဲ့ဖူးသည်။
Labels: Life, Perspective, အတွေးအမြင် |0comments | Links to this post
4:01 AM | Posted by Phyu | Edit Post
စာမရေးဖြစ်တာကြာပြီ။ ကိုယ့်ခေါင်းထဲမှာ မရှင်းနေတော့ စာလည်း ရေးချင်စိတ်မရှိတော့ ကိုယ့် Blog လေးကို ပစ်ထားမိတယ်။ စာရေးမယ် ကြံတော့ အခုတလော ကိုယ်လေ့လာမိတဲ့ အကြောင်းလေး တစ်ခုကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
ကျွန်မ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်က စပြီး ခရီးတွေ အများကြီး သွားခဲ့ပါတယ်။ တောင်ပေါ်၊မြေပြန့် အစုံပါပဲ။ ကျွန်မကို စိတ်အနှောက်အယှက် အဖြစ်စေဆုံးကတော့ အမှိုက်တွေပါပဲ။ ချင်းပြည်က တောင်ပေါ် လမ်းဘေးမှာလည်း အမှိုက်ပုံ၊ ဟုမ္မလင်းရဲ့ မြစ်သာမြစ်ဘေးမှာလည်း အမှိုက်တွေ၊ လမ်းမပေါ်မှာ၊ အိမ်ကြားတွေမှာ အမှိုက်တွေ။ ပလပ်စတစ် အပုံလိုက်တွေပါ။ သဘာဝပစ္စည်းတွေက ဖြစ်လာတဲ့ အမှိုက်တွေ ဖြစ်တဲ့ အသီးအရွက်တွေ အပိုအလျှံ အသီးအနှံခွံတွေဟာ ကမ္ဘာမြေနဲ့ သဟဇာတဖြစ်သူတွေမို့ မြေပေါ်ရောက်ရင် ဆွေးမြေ့သွားပေမယ့် ပလစ်စတစ်နဲ့ သူ့အပေါင်းအပါတွေကကတော့ မပျက်စီးနိုင်ဘဲ သူတို့နဲ့ သဟာဇတမဖြစ်တဲ့ မြေကမ္ဘာကို သူတို့ ဖျက်ဆီးကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ မြေတွေပျက်၊ ရေတွေကြီး၊ အဆိပ်တွေဖြစ် အပျက်သဘေတွေ ကျွန်မတို့ မြင်နေရတာပဲ မဟုတ်ပါလား။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမှိုက်ပြဿနာဟာ တော်တော်ကြီးနေပြီ ဆိုတာ မျက်မြင်။
လူဆိုတာ အခက်သားပါ သိပေမယ့် ကျွန်မ မကျင့်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ပလပ်စတစ်တွေ လုံးဝ မသုံး၊ အမှိုက်ကျန်မယ့် ပစ္စည်းတွေ မသုံး၊ Recycle နိုင်တဲ့ စ္စည်းတွေပဲ သုံးတဲ့ Zero Waste Lifestyle ( အမှိုက်ကင်းတဲ့ လူနေမှု ဘဝ) ပုံစံဆိုတာကို သဘာဝ ထိန်းသိမ်းသူတွေက ကျင့်ကြံနေထိုင်ကြတာ သိရပေမယ့် မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်မလိုပဲ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ သိသိကြီး ရှောင်ကွင်း အကြောင်းပြချက်တွေများပြီးနေခဲ့တဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးပညာ ကျောင်းသူတစ်ယောက်ရေးတဲ့ သူ့အကြောင်းလေးကို Mind,Body,Green ဆိုတဲ့ Website တစ်ခုမှာ ဖတ်မိပြီး ဝေမျှချင်စိတ်ဖြစ်လာတာကြောင့် စာရေးမယ်လို့ အကြံပေါ်လာတာပါ။
Lauren လို့ခေါ်တဲ့ နယူးယောက်သူတစ်ယောက်ပါ။ သူမက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဘာသာရပ်နဲ့ ကျောင်းတက်နေတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ တစ်ယောက်ပါ။ စာတွေ ဘယ်လောက်သင်သင် သူလည်း သူ့ကိုယ်သူ အကြောင်းပြချက် အမျိုးမျိုးနဲ့ပဲ အမှိုက်တွေဖွခဲ့မိပါတယ်လို့ သူကဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တနေ့သူ တခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့ စည်းကမ်းမရှိ အမှိုက်ဖွပုံ ပလပ်စတစ်တွေ သုံးပုံကို အတင်းပြောမိပြီး ကျောင်းကနေ အိမ်ကို ပြန်အလာ သူ့ရေခဲသေတ္တာကို သူဖွင့်ပြီး ပစ္စည်းတော်တော်များများအတွက် သုံးထားတဲ့ ပလပ်စတစ်အရေအတွက်တွေကို သတိပြုမိရာက ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရှက်မိပြီး ဘဝလူနေမှု ပုံစံကို Zero Waste အဖြစ်ပြောင်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ သူအဲဒီလို ပြောင်းဖို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နောက်ထပ် တွန်းအား တစ်ခုက ကလေးနှစ်ယောက်အပါအဝင် မိသားစုဝင်လေးယောက်ရှိတဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယားက မိသားစု ပါပဲ။ အဲဒီ မိသားစုဟာ ၄ ယောက်ရှိတာတောင် ကျင့်ကြံနေထိုင်နိုင်သေးရင် တစ်ယောက်တည်းသမား သူမက ဘာလို့ မနေနိုင်ရမှာလဲ ဆိုပြီး နမူနာယူခဲ့ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ မိသားစု တွေရဲ့ Blog တွေကတော့ Rauren ရဲ့ Blog က http://www.trashisfortossers.com/ ဖြစ်ပြီး Zero Waste Home ရဲ့ Blog က http://www.zerowastehome.com/ တို့ပါ။
Rauren ရဲ့ အတွေ့အကြုံ ဘယ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့ သလဲ ဆိုတာ မပြောခင် Zero Waste Home ဆိုတဲ့ မိသားစုလေးယောက်ရဲ့ ဘယ်လိုစရမလဲ ဆိုတာကို အကြံပေးထားတာလေးကို အရင်ပြောပြချင်ပါတယ်။
၁။ တစ်ခါသုံးမဟုတ်တဲ့ ရေဘူးတစ်ဘူး၊ ဈေးဝယ်အိတ်၊ အဝတ်အိတ်နဲ့ ပုလင်းတွေကို ရှာဖွေပြီး အသုံးပြုဖို့ စုဆောင်းပါ။
Refuse = ကိုယ်အသုံးမလိုတာကို ငြင်းဆန်ပါ။
Reduce = ကိုယ့်သုံးစွဲမှုတွေကို လျှော့ချပါ။
Recycle and Reuse= ကိုယ့်အသုံးပြုထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ပြန်လည် အသုံးပြုပါ။
Rot = မြေဆီသြဇာဖြစ်အောင် ဖျက်ဆီးလိုက်ပါ။ … လို့ အကြံပေးထားပါတယ်။
Lauren က သူ့ Zero Waste lifestyle ရဲ့ အစပိုင်း အတွေ့အကြုံတွေကို ပြောပြခဲ့ရမှာတော့ ..
“ ကျွန်မ ဈေးဝယ်အိတ်နဲ့ ဘူးတွေကို ဆောင်ထားတယ်။ စူပါမားကတ်မှာ ဈေးဝယ်တိုင်း ထုတ်ပိုးမထားရသေးတဲ့ အရာတွေကို ဝယ်ပြီး သူတို့ ပေးမယ့် ပလပ်စတစ်အစား ကိုယ်ယူလာတဲ့ အိတ်နဲ့ဘူးတွေထဲ ထည့်ပေးပါလို့ ပြောတယ်။ အဝတ်အစားအသစ်တွေ ဝယ်တာကို ရပ်လိုက်တယ်။ ဝယ်ဖို့ လိုအပ်လာပြီ ဆိုရင် အဟောင်းဆိုင်တွေက ဝယ်တယ်။ နီးစပ်ရာ ရောင်းချင်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆီက လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ပြန်ဝယ်ပေးတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ကိုယ့် မလိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို လိုတဲ့ သူတွေဆီ ပေးဖို့ ကြံလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ အများကြီး ထွက်လာတာကို တွေ့ရတယ်။ အသုံးအဆောင်နဲ့ အလှပြင် ပစ္စည်းတွေကိုလည်း သဘာဝ ပစ္စည်းတွေ ပြောင်းသုံးဖို့ ကြိုးစားတယ်။ သတိနဲ့ ကြိုးစားရတာက “ဟင့်အင်း” လို့ ပြောဖို့ပဲ။ ကော့တေးဘား သွားတဲ့အခါ ကော်ဖီဝယ်တဲ့ အခါ၊ ဈေးဝယ်တဲ့အခါ ပလစ်စတစ်ဘူးတွေ အိတ်တွေကို သတိထားပြီး ငြင်းဆန်ဖို့ပါပဲ။ နေ့ချင်းညချင်းတော့ ဘယ်အကျင့်ရလာမှာတဲ့လဲ အဲဒီ အသားကျဖို့ ၃ နှစ်လောက် ကြာအောင် ကြိုးစားခဲ့ရတာ အခုတော့ ကျွန်မ နေသားကျနေပြီ။
အခု ၃ နှစ်အကြာမှာ ကျွန်မအတွက် အကျိုးအမြတ်တွေက..
ကျွန်မ ဈေးဝယ်မသွားခင် အပိုတွေ မဝယ်မိဖို့ ဈေးဝယ်စာရင်းလုပ်သလို ထုတ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေလည်း မဝယ်တော့ အပိုတွေ မဝယ်ဖြစ်တော့ဘူး။ အသုံးအဆောင် တွေကိုလည်း အဟောင်းဆိုင်က ဝယ်တယ်။ အလှပြင် ပစ္စည်းတွေ၊ ဆေးတွေ ကလည်း သဘာဝ ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်လာတော့ ကုန်ကျစရိတ်က ခေါက်ချိုးမကျ သက်သာသွားတာကို တွေ့ရတယ်။
ထုတ်ပိုးထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ရှောင်တဲ့အခါ ပိုပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေ စားဖြစ်လာတယ်။ ဒေသတွင်းက လူတွေ စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်တဲ့ ထွက်ကုန်တွေ၊ ရာသီလိုက် အသီးအနှံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို စားဖြစ်လာတယ်။ ပိုပြီး ကျန်းမာတဲ့ စားသောက်မှု ပုံစံကို ပြောင်းလဲ လာနိုင်ခဲ့တယ်။
Zero Waste lifestyle အဖြစ်မပြောင်းခင်က စတိုးဆိုင်တွေ စူပါမားကတ်တွေဘက် တွေချည်း ခြေဦးလှည့်မိတယ်။ အခုတော့ တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ်သာ လိုအပ်တာတွေ ဝယ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး သွားတယ်။ ပိုပြီးကျန်းမာလာတယ်၊ သောကကင်းပြီး အချိန်တွေလည်း ပိုလာတယ်။ ပိုလာတဲ့ အချိန်တွေနဲ့အတူ Zero Waste lifestyle နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Blog တစ်ခု ရေးရာက စိတ်တူကိုယ်တူ လူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့် ရလာတယ်။ အဲဒီနောက်တော့ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး “ The Simply” လို့ခေါ်တယ် zero-waste ပစ္စည်းတွေကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို တည်ထောင်လိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်း နေထိုင်နိုင်ခဲ့လို့ ဘဝက ပျော်ရွှင်စရာ ပိုကောင်းလာပါတယ်။”
ကိုယ်ရဲ့ အတွင်းစိတ်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြီး ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို လျှောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ Rauren ကို ကျွန်မတော့ ချီးကျူးမိပါတယ်။ တကယ်တော့ စိတ်သာ ရှင်စော ဘုရားဟော မဟုတ်ပါလား။
Labels: ဆောင်းပါး |0comments | Links to this post
2:00 AM | Posted by Phyu | Edit Post
ကျွန်မ အတ္တကင်းတဲ့ အလင်းတစ်ပွင့် ဖြစ်ချင်တယ်။ မနေ့ညက သတင်းတွေ ဖတ်ရင်း CNN က မြန်မာအကြောင်း အချက်အလက်တွေ ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံလေး တစ်ပုံကို စိုက်ကြည့်မိတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေတဲ့ လူတွေရဲ့ သက်တမ်း (life expectancy ) က ၆၅.၅၊ ကမ္ဘာတဝှမ်း ပျမ်းမျှက ၆၉ လို့ ပြောထားပါတယ်။ကျွန်မ အသက် ဒီနှစ်ထဲ ၃၃ ပြည့်ပါတယ်။ ကျော်ဖြတ် ပြီးခဲ့တဲ့ ၃၃ ၊ နောက်ထပ် ၃၃။ လူ့သက်တမ်း တစ်ဝက်ကျိုးပြီပေါ့။
မျိုးကျော့မြိုင်ရဲ့ အသက် ၃၃ ကို ခဏ ခဏ နားထောင်မိတယ်။
ချစ်လိုက်ဦး ဘဝမှာ အချစ်ဆုံးတဲ့..
ကွဲလိုက်ဦး အချစ် ဒဏ်ရာများနဲ့..
အားလုံးသိတယ်… အားလုံးရဲ့ အလည်… ပြောလိုက်ဦး ကိုယ့် ဆင်ခြေများနဲ့
ရေးလိုက်ဦး ဟောဒီ အချစ်သီချင်းအတွက်..
မွေးလိုက်ဦး တစ်ဘက်လွန် ခံစားချက် ..
ဆွေးလိုက်ဦး… အထီးကျန် နေ့များထဲ
နောက်ကျတော့မယ်… အတွေးများ ပတ်လည်..
သွားလိုက်ဦး မဆုံးနိုင်တဲ့ ခရီးထဲ…
အသက် ၃၃ .. အထီးကျန် ဆန်လွန်းတယ်
ပြောလိုက်ဦး မဆုံးနိုင် အချစ်များနဲ့ ”
ဒီလူ့ဘဝ သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ အရာရာတွေ အားလုံး ကိုယ်မဖြစ်ဖူးတာ မလုပ်ဖူးတာ မရှိသလောက်ပဲ မဟုတ်လား။ ဒီလိုစုံအောင် တချို့အရာတွေကို ကိုယ်က လုပ်တယ်။ တချို့သော အရာတွေက ကံကြမ္မာက ကြုံစေ ဖယ်စေ စီစဉ်တယ် ဒီလိုနဲ့ ဘဝ တစ်ဝက်ကျိုးလာတယ်။ ခံစားချက်တွေလည်း အသစ်တွေ ရစရာ မကျန်တော့ဘူး အဟောင်းကြီးတွေပဲ ပြန်လည်လာတော့တယ်။
အားလုံးလိုလို ကျော်ဖြတ်ပြီးတဲ့ အသက် ၃၃ ဟာ တွေဝေတတ်စ အရွယ်ရောက်လာပြီ။ နောက်တစ်မျိုးပြောရရင် တည်ငြိမ်စ အရွယ်ရောက်လာပြီ။ ဘဝရဲ့ အရာရာက အရှိန်ကျပြီး တည်ငြိမ်ခွင့် ပေးလာခဲ့ပြီ။ နောက်တစ်ချက်က ခံစားချက်တွေ ထပ်ပြီး ရိုးအီလာပြီ။
တစ်ခါတစ်လေ ဖန်တီးပေးနေတဲ့ ကြမ္မာက ငါ့တာဝန်ကျေပြီ ရော့နင့်ဘဝရဲ့ စတီယာတိုင် နင်မောင်းတော့ ဆိုပြီး ယဉ်မောင်းသင်တန်းဆင်းသလို ဘဝမောင်းနှင်းမှု သင်တန်း ဆင်းပေးလိုက်သလားလို့တောင် ထင်မိတယ်။ အဆင်းမှာ ဘီးလှိမ့်ပြီး လမ်းမပေါ်မှာ ရောက်နေပြီ… ကိုယ်ဘဝ ကားကြီးက မမောင်းလို့လည်း မရတော့ဘူး။ စက်က နှိုးလျက်သားကြီး။
လူ့ဘဝအစမှာ မီးစာ တစ်ခုကို မီးညှိထွန်းလိုက်သလိုပဲ ဘယ်သူ ရှို့ပေးလိုက်မှန်း မသိပေမယ့် မီးစာမကုန်မချင်း လောင်ရတော့မှာပဲ။ အရှိန်ငြီးငြီးနဲ့ တောက်လောင်ပြီး မီးတွေထပ်ကူး လောင်စာတွေလိုက်ရှာ လောင်သထက်လောင်တဲ့ မီးစာ ဖြစ်မလား။ ဖယောင်းတိုင်လေးလို မီးစာတော့ ရှိပေမယ့် သူတပါးကိုလည်း ပူလောင်မှု အရမ်းကြီးမပေးဘဲ အလင်းဆောင် မလား။
နောက်ထပ် ၃၃ နှစ် ကျွန်မ ထပ်လောင်ဖို့ မသေချာပေမယ့် လောင်နိုင်ချေအားတော့ ရှိသေးတယ်။ နောက်ထပ် ဘဝရဲ့ လောင်နေတဲ့မီးကနေ မီးထပ်မပွားဖို့ လောင်စာတွေနဲ့ ဝေးဝေးမှာ ကျွန်မနေချင်တယ်။ အခု လောင်နေတဲ့ မီးစာလေးကိုလည်း အပူပေမယ့် အမှောင်ကိုခွင်း အလင်းဆောင်တဲ့ အပူတိုင်လေးအဖြစ် ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ နေရာချချင်တယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ လက သီရိလင်္ကာမှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့ ဆရာလေး တစ်ပါးနဲ့ စကားပြောမိတယ်။ ဆရာလေးက ရယ်ရယ်မောမော ပြောပြတယ်။ ဆရာလေး ဆယ်တန်းကျတော့ ငိုလိုက်ရတာလေ… အိမ်က ဆူမှာ ကြောက်တော့ နောက်ပိုင်း သီလရှင်ဝတ်လိုက်တယ်။ သီလရှင်ဝတ်လိုက်တော့ အရွယ်ကောင်းဆိုတော့ စာဝါလိုက်ရပြန်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာသင်တာ ပါဋိစာပေတွေ စာရပေမယ့် အသိ ဒီလောက်မဖြစ်ဘူး… အခု နောက်ပိုင်း စာပေကို နည်းမှန် လမ်းမှန်နဲ့ လေ့လာ တရားမှာ မွေ့လျှော်တတ်လာမှ ကိုယ်သိတဲ့ စာပေတွေကို လူတွေရဲ့ ဘဝအတွက် ဘယ်လို အသုံးချ ဟောပြောညွှန်ပြ ပေးရမယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း ဘယ်လို ကျင့်ကြံအားထုတ်ရမယ် ဆိုတာ ရေးရေးသိလာတယ်။ ဆရာလေး လျှောက်ရမယ့် လမ်းက အဝေးကြီးကျန်သေးပေမယ့် လမ်းကို တွေ့ပြီ အရင်လို မဝေဝါးတော့ဘူး။ ကိုယ်တိုင်လမ်းရှာတွေ့ပြီး ဆိုတော့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကိုလည်း ကိုယ်လျှောက်တဲ့ လမ်းကိုတော့ ပြခဲ့ဖို့ ကိုယ့်မှာ တာဝန်ရှိသွားပြီ။ ဒီလောက်ပါပဲ ဒကာမလေး.. လို့ ဆိုပါတယ်။
ကျွန်မဘဝရဲ့ မီးစာနဲ့ ဆရာလေး ဘဝရဲ့ မီးစာကို ယှဉ်ထိုးကြည့်မိတယ်။ ဆရာလေးကတော့ မီးစာရဲ့ အပူကို အရှိန်ငြီးငြီး မတောက်အောင် ထိန်းနိုင်ပြီး အလင်းဆောင်ဖို့ လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီ။ သူ့ဘဝဟာ လှပတဲ့ အလင်းတိုင် လေးပါပဲ။ ကျွန်မ ဘဝမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားပြီး လူတကာ အားထားရ အားကျရတဲ့သူ မဖြစ်ချင်ဘူး။ သေသွားရင် နှမြောတသသနဲ့ လူတွေကို ဝေဒနာ ပေးထားခဲ့ရတဲ့သူ မဖြစ်ချင်ဘူး။ ကျွန်မကြောင့်လဲ ကမ္ဘာကြီး မပြောင်းလဲ ချင်ပါဘူး။ အဲဒီလောက်ကြီး တောက်တောက်ပပ မထွန်းလင်းချင်ပါဘူး။ ကျွန်မက အပေါက်အပြဲလေးတွေ ဖာထေးပေးသူ လောက်တော့၊ ကွက်လပ်ဖြည့်သူလောက် ဖြစ်ရင် ကျေနပ်ပါတယ်။ ကျွန်မ ဘဝမှာ ဟိုလူ့ပူ ဒီလူ့ပူနဲ့ ဒုက္ခရောက်စေတဲ့ လောင်မီးလည်းမဖြစ်ချင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် လောင်ပြီး ဟုတ်ကနဲပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း အကျိုးမပေးတဲ့ ဒုက္ခလည်း မပေးတဲ့ ကောက်ရိုးမီးလည်း မဖြစ်ချင်ပြန်ဘူး။
နောက်ထပ် ကျန်လောက်သေးတဲ့ နောက်ထပ် အနှစ် ၃၃ လောက်ထဲက ၁၀-၁၅ နှစ်လောက်ကို လူဘဝမှာ သိပ်တောက်တောက်ပပ မဟုတ်ပေမယ့် အလင်း လည်းဆောင်တဲ့ ပျော့ပျော့ ပြောင်းပြောင်း ဖယောင်းတိုင်လေး တစ်တိုင်အဖြစ် လူပီပီသသ ဘဝကို စီးမြောခံစားရင်း နေချင်သေးတယ်။ အတ္တ-ပရ မျှမျှ၊ လောကီ-လောကုတ္တရာ မျှမျှ ကျိုးစားရင်းပေါ့။ အဲဒီနောက်တော့ ကိုယ့်ဘဝရဲ့ မီးစာကို ကိုယ်တိုင်ညှိမ်းပြီး လောကကြီးကို အဆိတ်ငြိမ်ဆုံး ဖြတ်သန်းပြီး ဘဝရဲ့ မီးစာတွေကို သိမ်းသွားချင်တယ်။
ကိုယ်တိုင် မသိမ်းနိုင်သူတွေအတွက် ကံကြမ္မာက နောက်ထပ် မီးစာတစ်ခု ပြင်ထားဦးမှာလေ။ ဒီဘလော့လေးကို ကိုယ့်ဘဝရဲ့ ဒိုင်ယာရီလေး တစ်ခုလို ရေးပြီး တစ်ခါတစ်ခါ ကိုယ်လမ်းပျောက်တိုင်း ငါအရင်က ဘာတွေ တွေးမိပါလိမ့်ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ရှာချင်တိုင်း ပြန်ဖတ်မိတယ်။ ဒီစာလေးကိုလည်း ပြန်ပြန်ဖတ်မိပြီး မီးစာငြိမ်းချိန်တန်ရင် ညှိမ်းဖို့ သတိရနိုင်ဖို့.. ဘဝမှာ မြောပြီး မေ့မနေအောင် ရေးထားလိုက်မိတယ်။
Labels: အတွေးအမြင် |0comments | Links to this post